नेपाल आज | ‘कम्युनिष्ट स्टेट’ ओलीको ‘रोमान्टिक सपना’ ( भिडियोसहित)
‘कम्युनिष्ट स्टेट’ ओलीको ‘रोमान्टिक सपना’ ( भिडियोसहित)
राप्रपा संयुक्तका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती भन्छन्, ‘जनताको हीतमा नभएको विषयलाई परिवर्तन मान्न सकिदैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो दुई वर्षे कार्यकाल निकै उपलब्धीमुलक भयो भनेर जतिसुकै रटान लगाएपनि जनताले भने सास्ती मात्र पाएका छन् । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । सुशासन छैन । महंगी मात्र छ । सुरक्षा छैन । के यही हो विकास र समृद्धि ? ’
वास्तावमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकार विकास र समृद्धि होइन ‘कम्युनिष्ट स्टेट’ बनाउन उद्धत छ । सरकारका हरेक गतिविधि केन्द्रीकृत छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको हरण भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीमा अधिनायकत्व देखिन्छ । संघीयता भन्ने तर काम संघीयता विपरित गर्ने भैरहेको छ । यो सबै ‘कम्युनिष्ट स्टेट’ बनाउन खोजिएको हो तर यो गलत बाटो हो । यो असम्भव छ । कम्युनिष्ट स्टेट नेकपाको रोमान्टिक सपना मात्र हो ।
संविधानमै रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दावली त्रुटीपूर्ण छ । मुलुक पूँजीवाद र उदारवादको अर्थनीतिमा छ । तर, कम्युनिष्टको चाहना बमोजिमको शब्द संविधानमा पर्यो कि भन्ने चिन्ता हो !
प्रधानमन्त्री जनताको हीतमा नभइ आफना कार्यकर्ताको हीतमा मात्र काम गरिरहेका छन् । उनी प्रजातान्त्रिक पद्धतीबारे ठूला कुरा त गर्छन् तर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम उनी स्वयं गरिरहेका छन् । बिभिन्न विधेयक र उनको असहनशीलताले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बलियो भएपनि काम गर्न नसक्नुको कारण उनको राष्ट्रवाद हो । भारतले नाकाबन्दी लगाएकाबेला राष्ट्रवादी भनेर छवि बनाएपनि अहिले उनको राष्ट्रवाद नक्कली रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भयो । उनलाई जनताले पत्याउन छाडिसके । ओली कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यही हो ।
भ्रष्टाचार, एमसीसी लगायतका विषयमा पनि ओलीको नियत सफा देखिएन । उनले एमसीसी राष्ट्रहीतमा छ भनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेनन् । भ्रष्टाचारमा त उनले नियन्त्रण होइन झन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन उनका मन्त्रीहरु पनि त्यस्तै छन् । भारतसंग यत्रो सीमा विवाद छ, तर उनीहरु हेलिकप्टरबाट लिपुलेक हेरेर जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट कालापानी हेरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुने हो ? भारतसंग वार्ता गर्न सरकारलाई के ले रोकेको छ ?
अर्का छन् संचार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा । उनले त आतंक मच्चाइरहेका छन् । एमसीसीको सवालमा उनले बोलेको के हो ? एमसीसी पास नभए अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर के भन्न खोजेको हो ? जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने सरकारले उल्टो धम्क्याउने ? आतंक मच्चाउने ?
नेता लावतीका अनुसार सरकारका गतिविधिलाई राप्रपा संयुक्तले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ । अहिले अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा भारत भ्रमणमा छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि भारतमा भएकाले धेरैले राजनीतिक खिचडी पाक्न थालेको रुपमा पनि लिएका छन् । भोलि के हुन्छ भन्न सकिदैन ?
अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र दलहरुले जनताको पक्षमा काम नगरेकाले राजनीतिक विकल्प अपरिहार्य छ । त्यो विकल्प भनेको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना नै हो । यसका लागि राप्रपा संयुक्त अनवरत लागिरहेको छ ।
यसका लागि राप्रपा संयुक्तले राप्रपासंग एकता प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । छिटो भन्दा छिटो दुई पार्टीबीच एकता घोषणा हुने लावती बताउँछन् ।